Allgedo.com » Xarakada Alshabaab oo Guulo ka sheegatay Dagaalo ka dhacy Gobolka Sh.Hoose
Xarakada Alshabaab oo Guulo ka sheegatay Dagaalo ka dhacy Gobolka Sh.Hoose
Print here| By: allgedo.com: Thursday, February 21, 2013 // u Jawaab
Ururka Al-Shabaab ayaa guulo ka sheegtay dagaalo ka dhacay Gobalka Shabelaha hoose oo ay sheegeen inay la galeen ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM.
Sida uu warbaahinta usheegay afhayeenka dhanka dagaalada ee Al-Shabaab Sheekh C/casiis Abuu Muscab dagaalka ka dhacay deegaanka Janaale ee Gobalka Shabeelaha hoose ayaa waxaa ku gacan sareeya Al-Shabaab.
Wuxuu sheegay in weerar culus ay ka geesteen afaafka laga soo galo Magaalada iyo sidoo kale xarunta Janaale halkaasi oo ay weerar culus ku ekeeyeen sida uu sheegay.
Abuu Muscab ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada Shabaab ay weerar kale ku qaadeen xero ciidan oo ay ku sugan yihiin ciidamada AMISOM oo Janaale ku taal halkaasi oo uu tilmaamay in khasaaro badan uu ka dhashay.
Afhayeenka Shabaab ayaa sheegay in ciidamada AMISOM ay ka dileen askar gaaraya ilaa dhowr iyo labaatan halka sida uu sheegay dhankoodana ay ka geeriyoodeen saddex askari.
Dagaalka ka dhacay Janaale ayaan la xaqiijin karin khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay ka sokoow guulaha ay labada dhinac kala sheeganayaan.